टीकटकमा रातभरी लाइभ बसेर दुई दिनमै दुई लाख कमाए पुण्य गौतम – Kavrepati
Home / मनोरंजन / टीकटकमा रातभरी लाइभ बसेर दुई दिनमै दुई लाख कमाए पुण्य गौतम
admin4weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 97 Views
काठमाडौं । युट्यूवरलाई अन्तर्वार्ता दिएर दिन बिताउने पुण्य गौतम विश्वासको अचानक दिनचर्या फेरिएको छ । अचेल उनी दिनरात टीकटकमा झुण्डिइरहेका हुन्छन् ।
टीकटक लाइभमा बसेकै भरमा मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने चाल पाएपछि गौतम अरु सबै कामधन्दा (प्राय फोगटका) छाडेर यसमा होमिएका हु्न् । उनलाई छोटो समयमै फलिफाप भएको छ । तीन दिन लाइभ बस्दा करिब २ लाख रूपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताए ।
कञ्चनपुरका अंशु बर्मा नाम गरेका युवकले १५ महिनामै टीकटकबाट करोड कमाएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भइरहेको थियो । उनलाई फ्लप पार्ने गरी पुण्य गौतम उदाएका छन् ।
‘त्यसपछि त मलाई रस पसिहाल्यो,’ उनले भने, ‘अब समय मिलेसम्म बसिन्छ ।’
श्रीमतीको प्रेरणाले आफू टीकटक लाइभमा बस्न थालेको गौतमले बताए । उनले भने, ‘यसभित्रका प्राविधिक पक्षहरुबारे मलाई धेरै जानकारी थिएन । श्रीमतीले नै सबै सिकाएकी हुन् ।’
गौतमसँग गरिएको थप संवादः
युट्यूवमा छाइरहनुभएकै थियो, एक्कासी कसरी टीकटक लाइभको भुत चढ्यो तपाईंलाई ? इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्दा म योजनाबद्ध तरिकाले आएको होइन । अस्ति शुक्रबार के भयो भने श्रीमतीजीले ‘एकछिन फ्रेस हुनुपर्‍यो लाइभमा बसौं’ भन्नुभयो । ल न त भनेर बसेँ । म देखिनासाथ एकैचोटि ४-५ हजार जोडिन आउनुभयो ।
लाइभमा आउनेहरूले धमाधम उपहारहरू फ्याँक्नुहुने रहेछ । मलाई त यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । गजबै लाग्यो । अनि त म ९ बजेदेखि लाइभ बसेको मान्छे बिहान साढे पाँच बजे मात्रै उठेँ । त्यतिञ्जेलमा मरोमा ३ लाखजति लाइक आएछ।
एकचोटिमा १२ हजारसम्म जोडिन आउनुभयो । तपाईंले हेर्नुभएको होला त्यो बेला निद्राले आँखा पनि राताराता भएका थिए। त्यसदेखि यता लगातार बसिरहेको छु । गजब मजा आइरहेको छ ।
तपाईंप्रति टीकटकमा मान्छेहरूको यतिविधि आकर्षण चाहिँ किन होला त ?
एकजना विदेशमा बस्ने इशा गुरुङ भन्ने बैनी हुनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा धेरै फलोअर्स छन् उहाँका । उहाँले पनि लाइभमा बस्छु भनेर तात्नुभएछ । तर, धेरैले सुझाव दिएछन् कि तपाईंले सक्नुहुन्न किनकी तपाईंसँग पुण्य गौतमजस्तो बोल्ने र हँसाउने क्षमता छैन । त्यसपछि हच्किनुभयो ।
लाइभ बसेर दिनमै लाखौं कमाइरहनु भएको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?
– तपाईं डलर कमाउने लोभले मात्रै टीकटक लाइभमा भिडिरहनुभएको हो कि अरु पनि कारण छन् ?
तपाईंहरूले लाइभ बसेर कमाउने पैसा त आखिर नेपालीहरुकै हो नि होइन ?
तर अरु देशका मान्छेहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न त भाषाको समस्या आउँदैन ?
यसरी दिनरात लाइभमा बस्दा तपाईंले बोल्ने विषय चाहिँ के हुन्छ ?
भनेपछि अब तपाईं युट्यूवरलाई अन्तर्वार्ता दिन छोडेर रातदिन टीकटकमै रमाउने हुनुभयो ?
मेरो योजना चाहिँ के छ भने बिहान ८ बजेदेखि अराउन्ड १२ बजेसम्म लाइभ बस्छु । दिउँसो अरु काममा हिँड्छु । अनि राति ७-८ बजेदेखि १२-१ बजेसम्म लाइभ बस्छु । अघि बिहान पनि ३ हजारजना लाइभमा हुँदा-हुँदै छोडेर बाहिर निस्केको हुँ । मलाई त बसेपछि हत्पत्ति छोड्नै दिँदैनन् । तर, अरु काम पनि त गर्नुपर्‍यो नि ।
अब टीकटकबाट कमाएको पैसाले के गर्ने त ?
मेरो मुख्य उद्देश्य त समाजसेवा नै हो । अरु तपसिलका कुराहरू त छँदैछन् नि ।
Previous बलिउड अभिनेत्री महिमा चौधरी: बोल्छि न् यती राम्रो नेपाली, भन्छिन्- ‘गो र्खाली हुँ’ (भिडियो सहित)
Next मलाई आफ्नै बुबाले मम्मी नहुदा ढोका थुनेर जक गर्नु भयो
नायिका सुष्मा कार्कीले आफूलाई बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खान मन पर्ने भएकोले उनैसँग विवाह गर्ने …